Ihu igwe nke Colombia | Njem zuru oke
Ihu igwe nke Colombia
Otu n’ime ihe ijuanya ndị njem bịara na nke mbụ Colombia bụ otu etu ihu igwe ya dị n’ime afọ. Ihe kpatara ya bụ na obodo ahụ dị na mpaghara equatorial, ya mere a naghị enwe oge a kara aka dịka n'ọtụtụ mba ụwa na oge awa anyanwụ na-awa ma ọ bụ daa anaghị agbanwe.
Colombia bu obodo nwere otutu uzo di iche-iche site na oke oyi rue okpomoku. O nwere oge abụọ dị mkpa: nke kpọrọ nkụ (site na Disemba ruo Jenụwarị na site na Julaị ruo Ọgọstị) na mmiri mmiri (site n’April ruo May na site na Ọktọba ruo Nọvemba). Mana nke dị n’elu apụtaghị na ihu igwe dị na Colombia bụ otu. N'ezie, nnukwu ọdịdị ala dị iche iche na-enye mba ahụ nnukwu ụba nke mbara ala, ala ikuku na ụdị ndụ dị iche iche.
Kpamkpam, dịgasị iche iche a, ndị njem nwere ohere ịhọrọ oge kacha mma iji gaa Colombia dabere na ha họọrọ ọkụ ma ọ bụ oyi. Iji mee ka o doo anya mgbe ị ga-aga mba ahụ, ọ kacha mma ịchọpụta ọnọdụ okpomọkụ ị nwere ike izute iji kwadebe maka ọnọdụ ọ bụla.
1 Kedu ihe bụ ugwu ugwu Colombia?
2 Kedu oge kacha mma iji gaa Colombia?
Kedu ihe bụ ugwu ugwu Colombia?
Oge na-ekpo ọkụ: N'ebe ndị nwere ihu igwe a, okpomọkụ ahụ karịrị 24 Celsius C, dị ka ọ dị na Pacific (ebe ị nwere ike ịlele whales humpback) n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean (ebe Tayrona National Natural Park dị na ebe a na-ewu ewu nke Barranquilla) na San Andrés (ebe njem nwere oke osimiri mara mma maka imi mmiri na eme egwuregwu mmiri ndị ọzọ).
Ọnọdụ ihu igwe na-agwụ ike: Ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 17 Celsius C na 24 Celsius C na mpaghara dịka Cali (ụlọ nke Cali ngosi a ma ama) na Medellín (ebe A na-eme Ihe ngosi Ifuru).
Oge oyi: N'ebe ndị nwere ụdị ihu igwe a, ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 12 Celsius na 17 Celsius C. Nke a bụ ihe gbasara Bogotá, isi obodo Colombia. Obodo na-agbakwunye ọdịnala na oge a maara dị ka Athens nke South America. Nleta dị mkpa iji mee na Bogotá bụ Gold Museum Ọ dị mkpa iji mụta banyere ọdịnala oge ochie tupu oge Hispanic ma ọ bụ akụkọ ama ama El Dorado.
Anyị kwụsịrị: N'ebe ndị a, ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 6 Celsius C na 12 Celsius C. Nke a bụ ọnọdụ nke Chingaza National Natural Park, akụ akụ sitere n'okike dị na Eastern Cordillera na mpaghara Andean na Colombia. Umu anumanu dika ndi nkasi obi, bea Andean na ndi ele ocha bi ebe a.
Mpaghara Glacial: A na-ahụ okpomọkụ dị n'okpuru 6 Celsius C ebe a. Nke a bụ ihe mere na Sierra Nevada de Santa Marta, nke dị n'ebe ugwu nke Colombia na Caribbean Coast, ebe ị nwere ike ịga njem.
Oke ohia ebe ohia: Site na okpomọkụ karịrị 27 Celsius C, oke ọhịa ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ. Otu a ka ọ dị banyere ụsọ oké osimiri Pacific, osimiri Magdalena na Catatumbo na Amazon, oke ọhịa kachasị baa ọgaranya na nke kachasị na mbara ala ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ọ exụ. Mmiri ozuzo na-ejupụta na afọ, na-abụ ọnwa Machị mgbe ha ruru uru kachasị. Agbanyeghị, mmiri kacha nta mmiri na-ada n'etiti June na Septemba. Ya mere, n’ihi ntakịrị mmiri ozuzo, ọnwa Julaị na Ọgọst bụ oge kacha mma iji gawa Amazon.
Nzọụkwụ ebe okpomọkụ: Ihe eji mara ya bu oke mmiri ozuzo ya, oke okpomoku ya na ahihia ya pere mpe. Ihe omuma atu abuo bu oke ohia nke Candelaria na Boyacá ma obu La Guajira, nke ejiri otutu aja ya na mbara ala ya. N'ebe a, ị nwere ike ịga leta ranchería iji chọpụta ọdịbendị nke ụmụ amaala Wayuu.
Ihu igwe Savannah: Ugbu a na Orinoquia, Bolívar, North nke Huila na etiti nke Cauca Valley. Ejiri akọrọ na udu mmiri mara ya, tinyere ahihia ahihia.
Uhu mmiri ihu igwe: Ugbu a na Caquetá, Vaupés, akụkụ nke Antioquia na Córdoba. Obere mmiri ozuzo, mgbanwe ikuku dị elu na ahịhịa na-esighi ike.
Kedu oge kacha mma iji gaa Colombia?
Oge kachasị mma iji gaa Colombia dabere na mpaghara ịchọrọ ịga na ezumike gị. Obodo a nwere oke onodu odidi di iche-iche nke a sụgharịrị gaa na mbara ala di iche-iche di iche-iche, mbara-ala di iche-iche na ala.
Dịka ọmụmaatụ, Na mpaghara Andean, oge kachasị mma iji mata ebe a bụ ọnwa nke ọnwa Julaị na Ọgọst n'ihi na n'oge a enwere okpomọkụ na obere mmiri ozuzo, nke dị mma maka njem. N'oge a ị ga-etinye uwe na-ekpo ọkụ na akpa gị (n'ihi na ọ na-ajụ oyi mgbe anyanwụ dara na abalị nwere ike oyi). Ọ dịkwa mma iwebata anwụ, n'ihi na ịdị elu nke mpaghara ahụ nwere ike ime ka ị gbaa ọkụ ngwa ngwa ọbụlagodi na ọnọdụ okpomọkụ anaghị adị oke.
Goga obodo ndị dị na gburugburu Amazon dịka Leticia, oge kachasị mma bụ ọnwa Julaị na Ọgọst n'ihi na ọ bụ ezie na mmiri na-ezo ọ dịkwa ọkụ kwa afọ n'akụkụ ụsọ mmiri ugwu ugwu nke Pacific. Goga South Pacific n'ụsọ osimiri ọnwa ndị a bụkwa ndị kacha adabara. Ọzọkwa, June na September kwesịrị ekwesị ịga leta mpaghara a. N'agbata Disemba na Eprel bụ oge kachasị mma iji gaa n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga Colombia iji nwee ọmarịcha okooko osisi ahụ, ị ​​ga-aga njem na mmalite oge udu mmiri n'ihi na n'ikpeazụ a ga-enwe idei mmiri n'akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ. Ihe ndi ozo bu mpaghara di gburugburu Bogotá na oke osimiri Caribbean.
N'otu aka ahụ, mgbe ị na-eme atụmatụ njem gị na Colombia ị ga-echeta na ebe dị elu nke mba ị na-aga, ala ndị ahụ ga-adị jụụ. Dịka ọmụmaatụ, snow na-ekpuchi elu ugwu dị elu nke mita 4.500. Site na ozi a niile banyere ihu igwe nke Colombia, ị ga-adị njikere ịmalite njem gị na obodo South America a mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ihu igwe nke Colombia
Obí eze kacha mkpa na India